Knowledge Archives - Myanmar Globe
ကင်ဆာရောဂါဆေးဒဏ်ကြောင့် ဖေါရောင်နေပြီး အပြင်းဖျားရောဂါခံစားနေရသည့် ပူတင် အာဏာသိမ်းမှု့နှင့် ကြုံတွေ့ရနိူင်ခြေရှိနေ…..
ကင်ဆာရောဂါဆေးဒဏ်ကြောင့် ဖေါရောင်နေပြီး အပြင်းဖျားရောဂါခံစားနေရသည့် ပူတင် အာဏာသိမ်းမှု့နှင့် ကြုံတွေ့ရနိူင်ခြေရှိနေ….. ယူကရိန်းစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Kyrylo Budanov က Sky News နဲ့သီးသန့်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ ကင်ဆာရောဂါနှင့် အခြားရောဂါဖျားနာမှုများ ရှိနေကြောင်း အတည် ပြုပြီး ပူတင်သည် အာဏာသိမ်းမှု၏ […]
အသေးစား ဆီတင်သင်္ဘောလေး (၂) စီးမှာ ပါလာတဲ့ စက်သုံးဆီက တနိုင်ငံလုံး ဘယ်နှရက် သုံးရမှာလဲ…?
စက်သုံးဆီ တင်သွင်းရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အသေးစား ဆီတင်သင်္ဘောလေး (၂) စီးမှာ ပါလာတဲ့ စက်သုံးဆီက တနိုင်ငံလုံး ဘယ်နှရက် သုံးရမှာလဲ…? မြန်မာ့ ရေပိုင်နက် ပင်လယ်ဝကို ရောက်နေတဲ့ စက်သုံးဆီတင် သင်္ဘော ၂ စင်းကတော့ ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်း ကစပြီးတော့ အမှန်တကယ်ကို […]
မြန်မာ့ရွှေဈေးကွက်ကို စကစ အာဏာသိမ်း၊ အွန်လိုင်းရွှေရောင်းသူမှန်သမျှ ဖမ်းမည်ဟု အမိန့်ထုတ်
မြန်မာ့ရွှေဈေးကွက်ကို စကစ အာဏာသိမ်း၊ အွန်လိုင်းရွှေရောင်းသူမှန်သမျှ ဖမ်းမည်ဟု အမိန့်ထုတ် ရွှေဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက် အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ရွှေအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်သူတွေကို ဖော်ထုတ် အရေးယူ သွားမယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်မျာ အသင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးမြင့်က ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်း ရွှေဈေးကွက်ထဲမှာ ရွှေဈေး ကစားသူတွေ နဲ့ ပြည်ပကို […]
ယူကရိန်းတွင် ရုရှတပ်အင်အား သုံးပုံတစ်ပုံ ဆုံးရှုံးဟု ဗြိတိန် ပြော
ယူကရိန်းတွင် ရုရှတပ်အင်အား သုံးပုံတစ်ပုံ ဆုံးရှုံးဟု ဗြိတိန် ပြော 17-May-2022 ယူကရိန်းတွင် တပ်ဖြန့်ထားသော မြေပြင်တပ်များမှ သုံးပုံတစ်ပုံကို ရုရှက ဆုံးရှုံးလိုက်ရနိုင်ပြီး ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသ ထိုးစစ်သည်လည်း အရှိန်အဟုန် ပျောက်ဆုံးပြီး စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိကြောင်း ဗြိတိန် စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ပြောသည်။ “အနည်းငယ်ပဲ ရှေ့ချီတက်နိုင်တာကလွဲလို့ ရုရှဟာ […]
“ရုရှားစစ်တပ်ကို အခက်တွေ့စေတဲ့ ယူကရိန်းကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့များအကြောင်း”
“ရုရှားစစ်တပ်ကို အခက်တွေ့စေတဲ့ ယူကရိန်းကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့များအကြောင်း” ယူဂာရိန်းစစ်ပွဲဟာ သုံးလနီးပါးရှိလာချိန်အထိ ရုရှားကလည်း သာလွန်အင်အားနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်နေသလို ယူကရိန်းကလည်း ကြံကြံခံကာ ခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ သို့သော် ရုရှားဟာ ယူဂာရိန်းရဲ့ မြို့တော် ကိယဗ်ကို မသိမ်းပိုက်နိုင်သေးပါဘူး။ ရှရှားစစ်ယာဉ်တန်းရှည်ကြီးဟာလည်း မြို့တော်ကိယဗ်အပြင်မှာ ရပ်တန့်နေပြီး ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲ အခက်တွေ့နေပါတယ်။ ရှရှားရဲ့ ကျူးကျော်စစ်ကို အဓိကအခက်တွေ့စေရတဲ့ […]
” မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလို့ အသိအမှတ်ပြုခံလိုက်ရတဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်၏ ကမ္ဘာကျော်သတင်း “
” မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလို့ အသိအမှတ်ပြုခံလိုက်ရတဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်၏ ကမ္ဘာကျော်သတင်း ” အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေတဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်ကို ” မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ” လို့ သုံးနှုံးပြီး တလေးတစား ခမ်းခမ်းနားနားနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် ။ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ […]
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ နှင့် ရခိုင်တပ်တော် ဆွေးနွေးပြီ
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ နှင့် ရခိုင်တပ်တော် ဆွေးနွေးပြီ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် တွင် ပလက်ဝ မြို့နယ် သံထောင် ရွာ အနီး တွင် အကြမ်းဖက် စစ်တပ် အတွက် ရိက္ခာများ သယ်ဆောင်လာသော ရဟတ်ယာဉ်အား ရခိုင်တပ်တော် မှ စတင် ပစ်ခတ်လာရာမှ […]
16.5.2022(တနင်္လာနေ့) ပြည်တွင်းရွှေဈေး နှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေလဲနှုန်းထားများ
16.5.2022(တနင်္လာနေ့) ပြည်တွင်းရွှေဈေး နှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေလဲနှုန်းထားများ ( ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများမှာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ) ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းသည် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် အရွက်ဈေး ကျပ် 2015~2035 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ် ရည်ညွှန်းဈေး ကျပ် 1850 (± 3)ဖြစ်ပါသည်။ အခြားငွေကြေး […]
ပြည်သူ့စစ်၊ BGF တို့ကို စစ်​ရေးရန်သူဟုသတ်မှတ်ပြီး ၂၀၀၈ခြေဥလက်ခံ​သောပုဂ္ဂိုလ်၊ ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို နိုင်ငံ​ရေးရန်သူဟုသတ်မှတ်ကြောင်း KIO/KIA အသိပေး
ပြည်သူ့စစ်၊ BGF တို့ကို စစ်​ရေးရန်သူဟုသတ်မှတ်ပြီး ၂၀၀၈ခြေဥလက်ခံ​သောပုဂ္ဂိုလ်၊ ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို နိုင်ငံ​ရေးရန်သူဟုသတ်မှတ်ကြောင်း KIO/KIA အသိပေး သက်ဝေ/People’s Spring စစ်ကောင်စီလက်ပါးစေ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သည့် ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့(BGF)များကို စစ်ရေးအရ ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံသည့် ပါတီ အဖွဲ့အစည်းများ၊ […]
ရွှေဈေးနီးပါး ကျပ်သိန်း၂၀လောက်ရနေတဲ့ ဆံပင်တစ်ပိဿာဈေး
ရွှေဈေးနီးပါး ကျပ်သိန်း၂၀လောက်ရနေတဲ့ ဆံပင်တစ်ပိဿာဈေး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်ပပို့ကုန်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ဆံပင်ဈေးကွက်မှာ လက်ရှိ တစ်ပိဿာကို အတိုအရှည်လိုက်ပြီး ကျပ် နှစ်သိန်းခွဲမှ ကျပ် သိန်း ၂၀ ဝန်းကျင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း ပုသိမ်မြို့ရှိ ဆံပင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရပါတယ်။ ဆံပင်ဈေးကွက်မှာ ယခင်က မူဆယ်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့သာအဓိက တင်ပို့ရောင်းချမှုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်ပိုင်းဈေးကွက်ပြောင်းလဲသွားပြီး […]